Tagging tranonkala iray dia mampiditra marika script amin'ny loha, vatana na tongotra amin'ny tranokala. Raha mihazakazaka sehatra an-tserasera maro ianao, serivisy fitsapana, fanaraha-maso ny fiovam-po, na koa rafitra rafitra votoaty mavitrika na kendrena, dia saika mitaky anao hatrany ny hampiditra script amin'ireo modely ifotoran'ny rafitra fitantanana atiny. Ny rafitra fitantanana tag (TMS) dia manome anao script iray hampidirina ao anaty ny maodelinao ary avy eo azonao atao ny mitantana ny hafa rehetra amin'ny alàlan'ny sehatra fahatelo. Ny rafitra fitantanana tag dia ahafahanao manangana fitoeran izay ahafahanao mandamina am-pahalalana ireo tag izay tianao hitantana.
Ny rafitra fitantanana tag dia mandeha manerana tambajotra fanaterana atiny haingana be izany. Amin'ny alàlan'ny fanaovana fangatahana tokana amin'ny serivisin'izy ireo ary avy eo dia manaparitaka script ao anatin'ny tranokalanao, azonao atao ny mampihena ny fotoana fandefasana entana ary manafoana ny fahafaham-baraka ny tranokalanao raha toa ka tsy mandeha ambany ny serivisy. Io dia hampiakatra ny tahan'ny fiovam-po sy hanampy ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Matetika ny rafitra fitantanana tag dia manolotra teboka ary kitiho ny fampidirana miaraka amin'ireo vahaolana rehetra omenao marika ny tranokalanao. Tsy mila kopia sy fametahana taonina akory, midira fotsiny ary alao ny vahaolana tsirairay!
Ity misy topy topimaso tsara momba ny tombony 10 ambony amin'ny fitantanana tag ho an'ny mpivarotra dizitaly Nabler.
Ensighten - Tantano ny marika sy ny data rehetra ataonao amin'ny alàlan'ny interface iray intuitive, misy mihoatra ny 1,100 fampidirana mpivarotra turnkey. Ampitahao sy fenoy ireo loharano angon-drakitra voazarazara manerana ny haitao sy fitaovana handroahana ROI lehibe kokoa avy amin'ny fivoaran'ny haitao mivoatra amin'ny alàlan'ny mpitantana tag data iray data.